Забур 36 CARS - Nnwom 36 AKCB
Awurade somfo Dawid dwom.
1Nkɔmhyɛ bi wɔ me koma mu a efi Onyankopɔn hɔ
a ɛfa omumɔyɛfo mmarato ho.
Onyankopɔn suro nni wɔn ani so.
2Na ɔno ankasa ani so no ɔdaadaa no ho dodo,
nti ɛmma onhu ne bɔne nnyae yɛ.
3Nʼanom nsɛm yɛ atirimɔden ne nnaadaa;
onnim nyansa bio na wayɛ papa.
4Ɔda ne mpa so mpo a ɔbɔ pɔw bɔne;
na ogyaa ne ho ma bɔne kwan
na ɔmpo nea enye.
5Awurade, wʼadɔe du ɔsorosoro
wo nokwaredi du wim tɔnn.
6Wo trenee te sɛ mmepɔw akɛse.
Wʼatɛntrenee mu dɔ sɛ po bun.
Ao Awurade, wokora nnipa ne mmoa nyinaa so.
7Wʼadɔe a ɛnsa da no som bo!
Nnipa mu akɛse ne nketewa
nya guankɔbea wɔ wo ntaban nwini ase.
8Wodi nea abu so wɔ wo fi,
woma wɔnom fi wʼanika asuten no mu.
9Wo nkyɛn na nkwa asuti wɔ;
wo hann mu na yehu hann.
10Kɔ so dɔ wɔn a wonim wo,
ma wo trenee ntena wɔn a wɔteɛ, koma mu.
11Mma ɔhantanni nan ntia me
anaa omumɔyɛfo nsa nnsunsum me.
12Hwɛ sɛnea nnebɔneyɛfo ahwehwe ase,
wɔdeda hɔ a wɔrentumi nsɔre bio.
AKCB : Nnwom 36